Ndege pfumbamwe dzevaChilean vanofamba vachimanikidzwa kumhara pamusoro pekutyisidzira bhomba
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » nhandare yendege » Ndege pfumbamwe dzevaChilean vanofamba vachimanikidzwa kumhara pamusoro pekutyisidzira bhomba
Airlines • nhandare yendege • Argentina Breaking Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Chile Kupwanya Nhau • mhosva • nhau • Peru Kuvhuna Nhau • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Trending Now
Ndege pfumbamwe munzvimbo yemuchadenga yeChilean, Peruvia neArgentina dzakamanikidzwa kumhara nekukurumidza pamusoro pekutyisidzira bhomba.
Ndege pfumbamwe munzvimbo yemuchadenga yeChilean, Peruvia neArgentina dzakamanikidzwa kumhara nechimbichimbi nekuda kwekutyisidzirwa kwebhomba, Chile Civil Aviation Authority yakati.
Kune mashanu ekubhururuka, guta guru reChile reSantiago raigona kunge iri nzvimbo yekubva kana kwaienda. Hwerengedzo yetyisidziro yebhomba 11 yakaitwa, asi zviremera zvakaona zviviri zvaizvozvi “zvokunyepedzera,” sezvo zvine chokuita nendege dzakanga dzisingashande.
Vakuru vePeruvia vakasimbisa kuti a Latam Airlines ndege 2369 kubva kuLima, Peru, kuenda kuSantiago, Chile, yakamanikidzwa kumhara panhandare yendege muPisco, Peru kutanga kweChina masikati. Zviremera zvePeruvia zvakange zvapihwa zano-nezve iyo yaifungidzirwa bhomba yaive muchikepe kubva kune vamwe vayo veChile
Latam ndege 433 kubva kuMendoza, Chile kuenda kuSantiago yakaburitswa pamugwagwa nekuda kwekumwe kutyisidzira kwebhomba, nepo Latam ndege 800, ichibva kuAuckland, New Zealand, yakaita kumhara kwechimbichimbi kwaienda kuSantiago.
Ndege yaifamba ichibva kuBuenos Aires yaienda kuChile yakamanikidzwa kumhara pakati peguta reArgentina reMendoza nguva dza7 mangwanani dzichiri. Nhandare yakabviswa uye yakavharwa, uye vezvekukurumidzira vakaongorora chiitiko ichi.
Sky Airlines, Chile yechipiri pakukura nendege kuseri kweLatam, yaive nendege nhatu dzakakanganiswa. Ndege yeSky Airlines 543 yakaitirwa kuRosario Airport kuArgentina Zvichakadaro, Sky ndege 524 yakasimuka kubva kuMendoza, Chile, ndokumhara nechimbichimbi muSantiago isati yaenda kuRosario; uye Sky flight 162 yakasimuka kubva kuSantiago, isati yarairwa kudzoka nekumhara.
Dzimwe nendege mbiri dzakateyiwa pasi, asi veChilean vezvemhepo havana kupa rumwe ruzivo.
Paakaongororwa, ndege dzese dzakanzi hadzina mabhomba. Hapana ruzivo rwakapihwa kuti ndiyani akaita kutyisidzira kwebhomba, kana kana paine hukama pakati pavo. Mapurisa parizvino ari kuyedza kutsvaga kwavakabva.
"Tinogara tine sutukesi yakasiiwa kana maviri, zvinowanzoitika," mukuru weChilean Civil Aviation Authority Victor Villalobos Collao akaudza musangano nevatori venhau kuSantiago airport, "Asi iyi inyaya isina kujairika."